ကလေးတွေကို အစာစားချင်စိတ်တိုးလာအောင် ဘယ်လိုကျွေးမလဲ? - Chit MayMay
Home Parenting Child Nutrition ကလေးတွေကို အစာစားချင်စိတ်တိုးလာအောင် ဘယ်လိုကျွေးမလဲ?
ကလေးတွေကို အစာစားချင်စိတ်တိုးလာအောင် ဘယ်လိုကျွေးမလဲ?
မေမေတို့က ကလေးတွေကို ပန်းကန်ပြားပေါ်က အစားအစာတွေ ကုန်အောင် အတင်းစားခိုင်းတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုရဲ့ အရေးပါမှုကို သိတဲ့အတွက်လည်း အဲ့လိုတွေလုပ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေမေတို့ မသိသေးတာက ကလေးကို ပန်းကန်ပြားပေါ်က အစားအစာ ကုန်ဖို့ ဘယ်သောအခါမှ အတင်းအကျပ် မခိုင်းသင့်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ဝင်နိုင်တဲ့အတွက် ဘာလို့ကောင်းကောင်း မစားရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကိုပဲ ရှာဖွေဖို့ အရင်ဆုံး ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
၁။ သူတို့ ကြိုက်တာလေးတွေ ကျွေးပါ
သူတို့ကြိုက်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဦးစားပေးဆုံးဖြတ်တာက စားချင်စိတ်ကို တိုးစေပါတယ်။ ထမင်းမစားခင် အချိုတွေ အများအပြားကျွေးခြင်းက ပန်းကန်ပြားပေါ်က ထမင်းဟင်းအားလုံး မကုန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့စားချင်မယ့် ဟင်းကောင်းလေးတွေ၊ အစားအစားလေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ကျွေးသင့်ပါတယ်။
၂။ အစာစားတဲ့အခါ အာရုံမပျံ့အောင် တားဆီးပါ
ကစားစရာတွေနဲ့ ဆော့ရင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရင်း မစားခိုင်းပါနဲ့။ ဒီလို အနှောက်အယှက်မျိုးတွေက ကလေးရဲ့ စားချင်စိတ်ကို လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ ကလေးရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို စောင့်ကြည့်ဖို့ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးအများစုသည် စိတ်ဖိစီးမှုပြဿနာတွေနှင့် ကစားစရာ အရုပ်တွေကြောင့် အစာစားဖို့ အာရုံပျက်တတ်ကြပါတယ်။
၃။ အစာစားချိန်ကို လှုံ့ဆော်မှုပေးတဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ပေးပါ
အရမ်းဗိုက်ဆာနေပြီလား? ဘယ်လောက်စားချင်တာလဲ? အရသာကောင်းလား? စတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အစာများများစားဖို့ မိသားစုလိုက် စားသောက်နေချိန်မှာ ကလေးကိုပါ အတူလိုက်ပါဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာတွေ ကုန်အောင် စားပြီးသွားတဲ့ အခါမှာလည်း ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီး လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းက ကလေးအတွက် ကျေနပ်မှုအဆင့်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ မတူညီတဲ့ အစားစားတွေ ကျွေးပါ
တစ်ချို့ရက်တွေမှာ ကလေးတွေက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် များများ မစားချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ကလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ကျွေးဖို့က အချိန်နဲ့ စိတ်ရှည်ဖို့ လိုပြီး မတူညီတဲ့ အစားအစားတွေကို ခဏခဏ ပြောင်းကျွေးခြင်းကလည်း ကလေးရဲ့ စူးစမ်းဖို့ အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ရာ ရောက်ပါတယ်။
၅။ ကလေးတွေ မှန်ကန်စွာ စားသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ကြီးထွားမှုကောင်းဖို့အတွက် ကလေးတွေ မှန်ကန်စွာ စားသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အာဟာရမျှတပြီး စားချင်စိတ်ရှိအောင် ကလေးအတွက် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Previous articleကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ မာကလာသီး စားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၇) ချက်
Next articleကလေးမွေးခြင်းက အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာတွေအတွက် အဖြေမဟုတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၆)ချက်